AVI Converter Mavericks: Sida loo Beddelaan AVI on OS X Mavericks
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan AVI on OS X Mavericks
Sida loo Beddelaan AVI on OS X Mavericks
Badan A weyn ee AVI video converters ee suuqa ka tago ka shaqeeya ka dib markii users cusboonaynta nidaamka qalliinka ay si cusub OS X Mavericks. Haddii video Converter waxaa sidoo kale dumay oo aad u baahan tahay si loogu badalo AVI si deg deg ah gudbiyo, waxaa jira ah Converter AVI user-friendly ah ee Mavericks Doorashadaada. Waxaa magaceeda la Wondershare Video Converter u Mac . Waxay kaa caawin karaan inaad badalo files AVI ama ka kale video files on Mavericks si fudud oo dhaqso.
Marka laga reebo diinta files AVI, waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo wmv, MKV, MOV, MP4, FLV, MPEG, Mpg, VOB, ASF, Jabbuuti, WebM iyo qaabab video dheeraad ah oo caan ah (Fiiro gaar ah: qaabab audio ka mid yihiin, sidoo kale). Waa maxay dheeraad ah, qaar ka mid ah qalabka caadiga ah video tafatirka waxaa la siiyaa, sida ku biirtay, lana siii, falinjeeerka, qoqobada, isagoo intaa ku daray saamaynta kala duwan, iwm Sidaas, waxaan ku dhiirran this video AVI Converter u Mavericks kulmi karaan dhammaan baahida diinta aad.
Next, kaliya raacaan hage tallaabo-tallaabo ah oo diinta files AVI ama videos in AVI videos.
1 Import AVI gudbiyo si Converter AVI this u Mavericks
Mouse ka dhaqaaq menu ugu weyn this app ee, riix "File" menu, ka dibna waxay doortaa "Load Media Files" ee doorasho. Suuqa kala pop-up A idinku hanuunin gal ah in aad ku jira faylasha AVI deegaanka. Next, double guji faylasha aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan in this app Mac. Oo weliba, howlgalka jiitaa-n-dhibic waxaa laga heli karaa in this video AVI Converter u Mavericks.
2 Dooro AVI ama qaab kale oo aad rabto in aad
In liiska qaabka wax soo saarka, app this aad bixisaa dhammaan qaabab loo jecel yahay audio & video iyo qalabka, oo ay ku jiraan AVI. Si loogu badalo videos in AVI, waxaad u baahan tahay in ay doortaan AVI sida qaab wax soo saarka. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo AVI in qaabab ama qalab kale, kaliya dooran qaab ama qalab aad rabto. Si aad u furato liiska qaabka wax soo saarka, kaliya ku dhacay qaab icon ugu hooseysa ee suuqa kala this.
3 Start AVI diinta on Mavericks
Hit badhanka wareega ee geeska midig hoose oo ka mid ah tan app 's interface ugu muhiimsan si ay u bilaabaan AVI diinta on Mavericks. Isla markiiba, taas AVI video Converter u Mavericks badalo doona faylasha aad iyo aad u muujiyaan bar horumarka diinta video ah. Ka dib markii ay diinta ka, waxaad ka heli kartaa files saarka galka wax soo saarka ah.
Sidee inuu ka soo kabsado Videos ka Kodak Playsport fiidiyo
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Videos ka SD Card
Sida loo Flip Video si fudud oo dhaqso